Galveston County Food Bank သည် မိသားစုများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာရွေးချယ်မှုများ တိုးမြှင့်ရန်အတွက် Morgan Stanley ဖောင်ဒေးရှင်းမှ $50,000 ရရှိသည် - Galveston County Food Bank
Galveston County Food Bank သည် မိသားစုများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာရွေးချယ်မှုများ တိုးမြှင့်ရန်အတွက် Morgan Stanley ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒေါ်လာ 50,000 ရရှိသည်
admin ရဲ့ မေလ 17, 20220မှတ်ချက်
Texas City, TX – မေလ 17 ရက်၊ 2022 ခုနှစ် - Galveston County Food Bank သည် အစားအသောက်ရွေးချယ်မှု တိုးချဲ့ရန်အတွက် Morgan Stanley Foundation မှ ထောက်ပံ့ငွေ $50,000 ရရှိထားကြောင်း ယနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် Galveston ကောင်တီရှိ အရောင်ရှိသော မိသားစုများ၊ ကလေးများနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းများကို Galveston County Food Bank ၏ မိတ်ဖက်အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်ဆိုဒ်များတွင် ရရှိနိုင်သော အစားအစာများ သို့မဟုတ် အစားအသောက်သေတ္တာများအကြား ရွေးချယ်မှု တိုးမြင့်လာစေရန် ပံ့ပိုးပေးကာ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်ကာ နှစ်သက်ဖွယ်ရာများနှင့် အစားအသောက်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အစားအစာများကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ယခု ဒုတိယနှစ်တွင်၊ ဤနိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့ငွေသည် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အတားအဆီးများကို ဖြေရှင်းပေးပြီး ရွေးချယ်မှုမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံများ တိုးမြင့်လာခြင်းဖြင့် အာဟာရပြည့်ဝသော အစားအစာမျိုးစုံကို ရရှိရေးအပေါ် အာရုံစိုက်လာပါသည်။ ရန်ပုံငွေများသည် COVID-19 ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောလ်များကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် Galveston County ရှိ အစားအသောက် ဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံများတွင် ရွေးချယ်မှုပိုများလာစေရန် Galveston County Food Bank အတွက် ထူးခြားသောအခွင့်အရေးကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုသည် အထူးသဖြင့် ကျေးလက်နေလူထုနှင့် အသားအရောင်ရှိသော အသိုင်းအဝိုင်းများရှိ ကလေးရှိသော မိသားစုများကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ ကလေး ၅ ဦးတွင် ၁ ဦး အပါအဝင် လူ ၆ ဦးတွင် တစ်ဦးသည် Galveston ကောင်တီတွင် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Galveston County Food Bank သည် Feeding America ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။® ကွန်ရက်သည် Morgan Stanley ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဤရန်ပုံငွေကို လက်ခံရရှိသည့် အဖွဲ့ဝင် 200 ပါဝင်သည့် အစားအသောက်ဘဏ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤထောက်ပံ့ငွေသည် Galveston County Food Bank အား Choice pantries သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ၎င်း၏ pantry လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ကူညီပေးနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ Covid 19 ကြောင့် ဧရိယာအတွင်း စားသောက်ကုန်များသည် ၎င်းတို့၏ အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှုများကို drive-thru ကိုသာ ပြင်ဆင်ပြီး စားသောက်ကုန်ဘဏ်မှ မိတ်ဖက်အေဂျင်စီများအား ဆိုင်တွင်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် ဖောက်သည်ရွေးချယ်မှုဖြင့် ပန်းကန်ပြားများတည်ထောင်ရာတွင် မိတ်ဖက်အေဂျင်စီများကို ကူညီပေးရန်အတွက် ကြိုတင်ကြိုးပမ်းမှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
“ရွေးချယ်စရာ ဟင်းချက်စရာ အစီအစဉ်က လိုအပ်နေတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အစားအစာ အထောက်အပံ့ပေးရုံသာမက ဖောက်သည်တွေရဲ့ အိမ်တွေမှာ အစားအသောက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို လျှော့ချရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်” ဟု Food Bank ၏ အာဟာရပညာရေး ညှိနှိုင်းရေးမှူး Karee Freeman မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဖောက်သည်တွေက သူတို့စားရမယ့်အရာကို ရွေးတယ်။ ဤအစားအစာပေးပို့မှုနည်းလမ်းသည် အစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်သော အစားအစာများထံသို့လည်း လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဝင်ရောက်နိုင်စေပါသည်။”
ပန်းကန်လုံးအားလုံးသည် ရွေးချယ်မှုပုံစံသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သော နေရာနှင့် စွမ်းရည်များ မရှိပါ။ Food Bank ၏ အာဟာရအဖွဲ့သည် အစားအစာရွေးချယ်မှုမှအစပြု၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများကို ဝေငှရာတွင် ရွေးချယ်စရာများ ပေးဆောင်ပြီး အာဟာရကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်များဆီသို့ ဖောက်သည်များအား အာဟာရပြည့်ဝသောထုတ်ကုန်များဆီသို့ ဖြည့်သွင်းသည့်အခါတွင် ကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုမှစတင်ပါသည်။
Freeman က “အသီးအနှံနဲ့ အသီးအနှံတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အစားအသောက်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်” လို့ Freeman က ဆိုပါတယ်။ “ဒါပေမယ့် သီးခြားယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအတွက် ပိုအဖြစ်များတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို ပြသဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။ အတားအဆီးများကိုဖြိုဖျက်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးနားချင်းများကို ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးအစားအစာရွေးချယ်ခွင့်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Morgan Stanley ဖောင်ဒေးရှင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။”
Feeding America သည် အစားအစာရွေးချယ်မှုတိုးချဲ့စဉ်အတွင်း အစားအစာမလုံခြုံသောအိမ်နီးချင်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်အစားအစာဘဏ်များကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အဖွဲ့အစည်းသည် ကလေးများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအပေါ် မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း ပိုမိုနားလည်နိုင်စေရန် တရားဝင်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
Morgan Stanley ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကလေးများအား ကျန်းမာသောဘဝစတင်မှုရရှိစေရန် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်ကြာ အပ်နှံထားပြီး အစားအသောက်မလုံခြုံသောမိသားစုများအတွက် ရွေးချယ်မှုများပြားလာစေရန် Feeding America ကွန်ရက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိကြောင်း Joan Steinberg မှ စီမံခန့်ခွဲရေးမှူး၊ Morgan Stanley မှ ဒါရိုက်တာ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပရဟိတအလုပ်၏အကြီးအကဲ။ "လူသန်းပေါင်းများစွာသည် ကပ်ရောဂါကြောင့်သာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည့် United States တွင် စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှုကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီး ငတ်မွတ်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ကလေးများနှင့် မိသားစုများကို ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် Feeding America နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။"
Morgan Stanley သည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ရင်ဆိုင်နေရသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများကို ကူညီရန် ကာလရှည်ကြာ ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကလေးများနှင့် မိသားစုများအတွက် အစားအစာနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအစာများ ပေးဆောင်သည့် အစားအစာနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစားအစာများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Feeding America ထံသို့ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ 41.7 သန်းကျော် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ငတ်မွတ်မှုအဆုံးသတ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် သင်မည်ကဲ့သို့ပါဝင်နိုင်သည်ကို ပိုမိုလေ့လာရန်၊ www.galvestoncountyfoodbank.org သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Galveston County Food Bank အကြောင်း
Galveston County Food Bank သည် ထိခိုက်လွယ်သောလူဦးရေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းများနှင့် အစားအသောက်ဘဏ်မှ စီမံခန့်ခွဲသည့် အစီအစဉ်များမှတဆင့် စီးပွားရေးအရချို့တဲ့သော၊ ခံနိုင်ရည်မရှိသော လူဦးရေများအတွက် အာဟာရအစားအစာများကို လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါသည်။ ကလေးထိန်း၊ အလုပ်နေရာချထားမှု၊ မိသားစုကုထုံး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြားလိုအပ်ရာများ ကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်များအတွက် ကူညီပေးနိုင်သည့် အခြားအေဂျင်စီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်ပေးကာ ၎င်းတို့နှင့် မိသားစုများကို စားနပ်ရိက္ခာကျော်လွန်၍ အရင်းအမြစ်များ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်/သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ဖူလုံရေးလမ်းကြောင်း။ လည်ပတ်ပါ။ www.galvestoncountyfoodbank.org၊ ကျွန်တော်တို့ကိုရှာပါ။ Facebook က, တွစ်တာ, Instagram ကို နှင့် LinkedIn တို့.
Morgan Stanley အကြောင်း
Morgan Stanley (NYSE: MS) သည် ကျယ်ပြန့်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ငွေချေးစာချုပ်၊ ကြွယ်ဝမှု စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနေသည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း 41 နိုင်ငံတွင် ရုံးခွဲများဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းများသည် ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အစိုးရများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Morgan Stanley အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ www.morganstanley.com.
Feeding America® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အကြီးဆုံးသော ဆာလောင်မှု သက်သာစေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အစားအသောက်ဘဏ် 200 ကျော်၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာဘဏ်အသင်း 21 ခုနှင့် မိတ်ဖက်အေဂျင်စီ 60,000 ကျော်၊ အစားအသောက်ဆိုင်များနှင့် စားသောက်မှုအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယမန်နှစ်တွင် လိုအပ်နေသော လူသန်းပေါင်းများစွာအတွက် အစားအစာ 6.6 ဘီလီယံကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ Feeding America သည် စားနပ်ရိက္ခာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို တားဆီးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လူများကြားတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေး မြှင့်တင်ပေးသည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော လူမှုရေးနှင့် စနစ်ကျသော အတားအဆီးများကို အာရုံစိုက်စေသည်။ လူတွေကို ဆာလောင်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတွေအတွက် ထောက်ခံသူတွေပါ။ www.feedingamerica.org တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာဖွေပါ။ Facebook က သို့မဟုတ်အကြှနျုပျတို့ကိုလိုကျနာ တွစ်တာ.
လွန်ခဲ့သော Previous post: ကျွန်ုပ်တို့၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်းညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် တွေ့ဆုံပါ။